DEG-DEG: Ra'iisal Wasaaraha UK Ee Boris Johnson Oo Sheegay Wakhtiga Ay Jamaahiirtu Garoomada Ku Laaban Karaan - Gool24.Net
DEG-DEG: Ra’iisal Wasaaraha UK Ee Boris Johnson Oo Sheegay Wakhtiga Ay Jamaahiirtu Garoomada Ku Laaban Karaan
Ra’iisal wasaaraha dalka UK ee Boris Johnson ayaa shaaca ka qaaday wakhtiga uu rajaynayo in jamaahiirta ciyaaraha kala duwan loo ogolaan doono inay sidii caadiga ahayd garoomada uga qayb galaan kaddib mudo ay ka maqnaayeen.
Sida uu sheegay Boris Johnson, jamaahiirta gaar ahaan kuwa ciyaaraha kala duwan xiiseeya ee ku sugan guud ahaan UK ayaa garoomada dib ugu laaban kara bisha October ee sanadkan.
Ciyaaraha kala duwan ayaa inta badan caalamka ahaa kuwo soo qabsoomayay jamaahiir la’aan tan iyo bishii March sababtoo ah cabsi laga qabay inuu sii faafo caabuqa dilaaga ah ee Korona Fayras.
Laakiin ra’iisal wasaare Boris oo qaadaya talaabooyinka xiga ee nolosha sideedii caadiga ahayd loogu soo celinayo kaddib markii xayiraadii xanuunka UK laga qaaday saaka oo Jimce ah ayaa sheegay inay October rajaynayaan in jamaahiirtu garoomada ku laabtaan.
“Laga bilaabo October waxaanu ku talo jirnaa inaan dhagaystayaasha kusoo celino garoomada” ayuu yidhi Mr Boris Johnson.
Hadalkan ayaa ah mid kor u qaadaya suurogalnimada ah in kaliya bisha koowaad ee xilli ciyaareedka 2020-21 lagu ciyaari doono garoomada kubadda cagta taageerayaal la’aan.
Il-wareedka Sportsmail ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxuhu ay ku wargeliyeen jamaahiirtooda inay rajaynayaan inay garoomada kusoo laaban doonaan xilli hore oo xilli ciyaareedka dambe ah.
Marka dib loo bilaabo in taageerayaashu ay garoomada kala duwan ku laabtaan, ayaysan waxba sidii hore caadi ugu noqon doonin waxaana lasii hayn doonaa sharciyada xanuunka Korona iyadoo kala fogaanshuhu jirayo tiro xadidana garoomada loo sii dayn doono.